အရေးကြီးသော အင်္ဂလိပ်စကားပြော ၅ချက် - Myanmar Network
အရေးကြီးသော အင်္ဂလိပ်စကားပြော ၅ချက်
Posted by Thu Aung Ye Nyunt on December 21, 2011 at 2:27 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီအချက်ကတော့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လေးနက်စွာလေ့လာခြင်းပါပဲ။ Deep learning isakey to automatic speaking ပါပဲ။Automatic speaking ဆိုတာကတော့ မစဉ်းစားပဲ ပြောခြင်း..ဘာသာမပြန်ပဲ ပြောခြင်း…grammer rules တွေကို မစဉ်းစားပဲ ပြောခြင်း…စကားလုံးများလွယ်ကူစွာ ထွက်လာခြင်း တို့ပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပြောမည့်စကားလုံးများကို ထွေထွေထူးထူး ကြိုးစားစရာမလိုအပ်ပဲ ပြောခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့် လေးနက်စွာ လေ့လာမှုပြုပါ။ deep learning =speak easily ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းနေဘ၀တွင် deep learning ဆိုတာကို သိပ်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါ။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်တို့ ပညာရေး စနစ်ကြောင့်ပါပဲ။ ဥပမာ-ယနေ့ chapter 1 ဆိုပါစို့။ ဆရာက paragraph တွေ ကို ရှင်းပြတယ်။ ဒါက ဒီလို..ဟိုဟာက ဟိုလို။ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပြီး သေသေချာချာရှင်းပြပါတယ်။နောက်နေ့ အဲ့ဒီ chapter 1 နဲ့ပတ်သက်ပြီး exercise တွေလုပ်တယ်။ နောက်နေ့ grammer ဆရာက အဲ့ chapter 1 နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ exercise တွေထပ်လုပ်တယ်။နောက်အပတ်ရောက်တော့ chapter2ကို ထပ်သွားတယ်……ဒီလိုပဲ ထပ်လုပ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ စာမေးပွဲ ဖြေကြတယ်။ စာမေးပွဲအောင်တော့ နောက်တစ်တန်း ထပ်တက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်တန်းပြီး တစ်တန်း တက်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကြားကြရမှာပါ။၁၀တန်းသင်ရိုးကို ဘယ်ဆရာက ဘယ်နှစ်လပြတ်နဲ့ အပြတ်သင်တာ။ဆရာတွေကလည်း အပြိုင်အဆိုင်ပေါ့။အမြန်သင် ပြိုင်ကြတာ။ နောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ပဲ အဲ့ဒီဒဏ်တွေ ခံကြရတော့တာပဲ။ ပြီတော့ တက္ကသိုလ် ရောက်တယ်။ တက္ကသိုလ်ကျပြန်တော့လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပဲ …..ဘွဲ့ရပြီးတဲ့နောက် သင်ကြားခဲ့သော lesson များဟာ ရေးရေးပဲ မှတ်မိနေတော့ပါတယ်။ အပြင်လောကမှာ အဲ့ဒါတွေ ကို အသုံးပြုဖို့ အတော်ကို အလှမ်းဝေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘွဲရဖို့အတွက် ကျောင်းနေခဲ့ကြရတာပါ။ဒါက ကျွန်တော်တို့ ခေတ်အကြောင်းပါ။ အရင်ခေတ်ကတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ သမိုင်းဘာသာ ကို အင်္ဂလိပ်လို သင်တဲ့ခေတ်ပါ။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ deep learning ဆိုတာနဲ့ အလှမ်းဝေးခဲ့ကြရပါတယ်။လေးနက်စွာ လေ့လာမှုကို ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ …မိမိလေ့လာသော phrases ဒါမှ မဟုတ် audio story တွေကို repeating လုပ်ဖို့ပါပဲ။မှန်ကန်သော အပြင်လက်တွေ့ဘ၀တွင် အမှန်တတကယ် အသုံးတည့်သော material တွေကိုသာ repeating လုပ်ဖို့ပါပဲ။ Reapting ကို ဘယ်လောက် လုပ်ရမလဲ..ဆိုတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။အထပ်ထပ် လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။သင်ပြောသော နေ့စဉ်စကားများထဲတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်လာတဲ့အထိ လုပ်ရပါမယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကို နားလည်တတ်ကျွမ်းသော လူအများကြားထဲ စကားပြောဆိုရာတွင် မိမိ repeating လုပ်ထားသော စကားလုံးများ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်လာတဲ့အထိ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည့်မှု ထားရှိပါ။ အမှားများ ပြုလုပ်ရန်ကြောက်စရာမလိုသင့်ပေ။လူတွေကသာ သင်အမှားပြုလုပ်သည်ကို အမှန်အဖြစ် ပြုပြင်ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။ သင်မှတ်သားမည့် pharases ဒါမှ မဟုတ် simple story တစ်ခုခုကို repeating သုံးလေးခေါက်လောက် လုပ်ပြီး ငါ့တိုးတက်မှု တော်တော်မြန်ဆန်နေပါလား။ငါတော်တော်ဟုတ်နေပါလားဟု မယူဆသင့်ပေ။ ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်ထဲတွင် စွဲမြဲလာတဲ့အထိ လုပ်ရမှာပါ။IT’S CALLED DEEP LEARNING.ငါ reapting ဒီလောက်လုပ်တာတောင် ပြန်ပြန်ပြီး မေ့နေပါလား တိုးတက်မှုမရှိပါလား တစ်ခုခုများ မှားနေပြီးလားဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်မကျသင့်ပါ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ NOTHING IS WRONG ပါ။ ဘာကြောင့်မို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ English language ကို second language အနေနဲ့ လေ့လာနေကြလို့ပါပဲ။
အမြဲတမ်းနဲ့ အဆုံးမရှိသော တိုးတက်မှု ( CANI) ရချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့စဉ်လေ့လာမှုကို ပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Thu Aung Ye Nyunt on December 21, 2011 at 3:09
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းများ အကို အမများ ဝေဖန်အကြုံပြုရေးသားနိုင်ပါသည်။ အကြုံပြုရေးသားသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး နှစ်သစ်မှာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Permalink Reply by mkmichiko2 on December 24, 2011 at 20:47
I will try according your suggestion and I will try my best . Thanks for all .
Permalink Reply by 2gk66wwv9plwz on May 3, 2012 at 14:00
Thanksalot your advice. I want to know that how to get the best web site for listening lessons, pls.
Permalink Reply by 1mkcbmowg5pmq on May 7, 2012 at 5:00
You gave us really really great suggestion and you highlighted our mistake learning systme. I totally agree with you. Please give us some more advice. Good luck...bro
Permalink Reply by 1nmxxbtm7ff2j on December 21, 2011 at 21:08
Thanksalot brother . Your suggestions are actually useful for me . I deeply agree and believe in your thoughts and suggestions. I dont like our teaching program . i mean the learning and teaching program since when we were childhood . Bye bye ... i do hope we will meet next time ...
Permalink Reply by 1tvu59ccj2avt on December 28, 2011 at 22:24
အရမ်းသဘောကျတယ် ခုလိုဘယ်လိုလေ့ လာရမယ်ဆိုတာကို သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှုင်။
Permalink Reply by zaw aung on December 31, 2011 at 19:14
i have found some persons who r very good in english, all4skills. i asked them how did they learned to get this position. all give me the same answer: first, study grammar then readalot, listenalot and speakalot.
Permalink Reply by par bi thar on January 3, 2012 at 10:57
they are very useful suggestions. thanksalot !
Permalink Reply by Zaw Win on May 3, 2012 at 16:32
I really appreciate all your post.
It is the best way to improve our Spoken English Skill.
But we have to be crazy in Spoken English.
It means we dare to speak English among the Myanmar citizens.
If we go abroad, we have to speak English for communication.
So we should practise ourselves. Practice makes perfect.
Permalink Reply by YIN YIN PYONE on May 5, 2012 at 19:24
Thanks for ur post.I agree ur. suggestions..I think it's the best way to improve..so i 'll do my best.
let me share ur post.
Thanks for all, fri.
Permalink Reply by Aung Thet Paing on May 10, 2012 at 16:31
Permalink Reply by kyawtun on May 11, 2012 at 4:08